उज्यालो रेडियो नेटवर्क नेपालका पत्रकारहरूको प्रयासमा शुरु गरिएको नीजि क्षेत्रबाट सञ्चालित सूचना तथा समाचारमा आधारित एकमात्र एफ.एम. तथा स्याटलाईट रेडियो च्यानल हो। यस एफएमलाई सार्वजनिक प्रसारण माध्यमका मूल्य र मान्यतालाई प्राथमिकता दिने प्रसारण माध्यमको रूपमा पनि लिईन्छ ।
यो रेडियो च्यानलले देशभरिका करोडौ श्रोतालाई २०० भन्दा बढी एफ.एम. स्टेशनहरू मार्फत हरेक दिन बिहान ५ बजेदेखि राती १० बजेसम्म समाचार, बिश्लेषण तथा विभिन्न समाजिक कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने गर्दछ।
जि पि ओ: ६४६९ काठमाडौँ, नेपाल
टेलिफोन नं :+९७७ १ ५४५५८७०, ५४५५८७१, ५४५५८७२ र ५४५५८७३
फ्याक्स :+९७७ १ ५४४९३५७
+९७७ १ ५४५१७१६
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=उज्यालो_एफएम&oldid=1037891" बाट अनुप्रेषित
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक १४:१९, २८ सेप्टेम्बर २०२१ मा परिवर्तन गरिएको थियो।